I-Intanethi ye-Ultrasonic Sludge Interface Meter T6080
Inzwa yesinxibelelanisi se-Ultrasound Sludge inokusetyenziselwa ukuqhubeka nangokuchanekileyo ukumisela iNqanaba loTywala. Idatha ezinzileyo, intsebenzo ethembekileyo; umsebenzi owakhelweyo wokuchonga ngokwakho ukuqinisekisa idatha echanekileyo; Ukufakwa okulula kunye nokulinganisa.
Inqanaba le-Ultrasonic Liquid Meter T6085
Inzwa ye-Ultrasonic Level sensor ingasetyenziselwa ukuqhubeka nangokuchanekileyo ukumisela iNqanaba loTywala. Idatha ezinzileyo, intsebenzo ethembekileyo; umsebenzi owakhelweyo wokuchonga ngokwakho ukuqinisekisa idatha echanekileyo; Ukufakwa okulula kunye nokulinganisa.
I-Intanethi ye-Ultrasonic Sludge Interface Meter T6580
Imitha ye-Ultrasonic yeNqanaba loLwelo kwi-T6585
Imitha eseleyo ye-Chlorine Meter T4050
Imitha eseleyo yechlorine eyimitha yimicroprocessor esekwe kumgangatho wamanzi isixhobo sokujonga esweni.
Umgangatho waManzi kuMgangatho wokuGada, Ph woluvo Electrode, Isilumko seChlorophyll, UkuCwangciswa kwamanzi okuQiniswa okuManzi okuManzi, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isilumko sokuSebenza kweTitanium,